Do 64-megapixel phone cameras really makeadifference? | Net Guide
Home Article Do 64-megapixel phone cameras really makeadifference?
စမတျဖုနျးတှအေတှကျ ကငျမရာပိုငျးမွငျ့တငျ့မှုတိုးတကျလာနိုငျစှမျးဟာ အတျောအားကောငျးလာပွီလို့ သတျမှတျနိုငျမှာပါ။ အခုနောကျဆုံးထှကျဖုနျးတှမှောဆိုရငျ 64MP ဆငျဆာတှကေိုတောငျ သုံးလာခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ Xiaomi ရဲ့ Redmi Note 8 Pro နဲ့အတူ Realme XT ၊ Vivo Nex3ဖုနျးတှမှော 64-megapixel Samsung GW1 sensor ကို သုံးလာကွပါတယျ။ 2019 ပထမနှဈဝကျလောကျတုနျးက 48-megapixel ဖုနျးကငျမရာတှေ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ဖွဈလာမယျလို့ ထငျခဲ့ပမေယျ့ အခုတော့ 64MP အထိကို ခုနျတကျသှားခဲ့ပါပွီ။ 48-megapixel ဖုနျးတှဟော 12-megapixel ပုံတှကေို pixel-binned လုပျပေးပွီး 64-megapixel ဖုနျးတှကေတော့ 16-megapixel images တှကေို ထုတျပေးတာဖွဈပါတယျ။ Pixel ပေါငျးစပျ နိုငျစှမျးမှာပိုကောငျးပွီး အသေးစိတျကတြဲ့ ဓာတျပုံတှကေို ရရှိသှားတယျလို့ ပွောရငျပိုမှနျပါတယျ။
48MP resolution နဲ့ quad-pixel sensors ဟာ စြေးကှကျပိုငျးအရ ဦးဆောငျနိုငျမယျလို့ သတျမှတျခံခဲ့ရပွီး 48MP ဆငျဆာရှေးခယျြမှုအပိုငျးမှာတောငျ Samsung ရဲ့ GM1 နဲ့ GM2(ထပျတိုး) တို့ထကျစာရငျ Sony ရဲ့ IMX586 ကို ရှေးခယျြမှုပိုမြားခဲ့ပါတယျ။ အခု 64MP ဆငျဆာမှာတော့ Samsung ရဲ့အလှညျ့လို့ ဆိုရမှာပါ ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ လကျရှိ ထှကျထားတဲ့ဖုနျးတှမှော သူ့ဆငျဆာကို အသုံးပွုနကွေလို့ပါဘဲ။ ISOCELL Bright GW1 ဟာ အလငျးအားနညျးခြိနျမှာ pixel4ခုကို တဈခုဖွဈစအေောငျ ပေါငျးစညျးပွီး 16MP ပုံတှထေုတျပေးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီတပတျမှာတော့ 64-megapixel ဖုနျးတှနေဲ့ လကျရှိကငျမရာကှာခွားခကျြတှအေကွောငျး ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ . . .
64-megapixel camera: how it works
ISOCELL Bright GW1 ဟာ Samsung ကနေ ထုတျထားတဲ့ 48MP image sensor လိုပဲ 0.8 μm အရှယျ pixel တှေ သုံးနိုငျတဲ့ 64MP sensor ဖွဈပါတယျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ အလငျးဖမျးတဲ့နရောမှာ ပိုပွီးအလငျးဝငျမှုမွငျ့တဲ့ အကွီးစား sensor တဈခုဖွဈပါတယျ။ 48MP sensor ကတော့ 12MP ပုံတှကေို default အနနေဲ့ထုတျပေးနိုငျပါတယျ။ Samsung ရဲ့ 64MP sensor မှာ tetracell binding နညျးပညာကို သုံးထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အလငျးရောငျနညျးတဲ့အခြိနျမှာဆိုရငျ tetracell binding နညျးပညာက pixel လေးခုကို တဈခုတညျးအဖွဈ ပွနျခြုံ့ပေးပွီး ကွညျလငျပွတျသားတဲ့ 16MP ပုံတှကေို ထုတျပေးမှာပါ။ တကယျလို့ အလငျးရောငျ လုံလုံလောကျလောကျရှိတယျဆိုရငျတော့ 64MP အပွညျ့ရှိတဲ့ ပုံရမှာဖွဈပါတယျ။ Autofocus ပိုကောငျးလာဖို့နဲ့ 480 fps full HD recording အတှကျ high-performance phase detection လညျး ပါဝငျလာပါတယျ။ Real-time HDR ကိုလညျး support လုပျမှာပါ။ 48 MP sensor မှာ သုံးထားတဲ့ 0.8μm pixel size ကိုပဲ 64 MP sensor မှာ ပွနျသုံးထားတဲ့အတှကျ overall sensor size ကို 33% အထိ ပိုကွီးသှားစပွေီး 1/1.7” sensor လောကျ ဖွဈသှားစပေါတယျ။
Best phones with 64MP camera
64MP ISOCELL Bright GW1 sensor သုံးထားတဲ့ စမတျဖုနျးတှကေတော့ အောကျပါအတိုငျးဖွဈပါတယျ
Realme XT ရဲ့ပါဝါစှမျးအားပိုငျးအတှကျ 10nm Snapdragon 712 chipset ကိုသုံးထားပွီး 4GB, 6GB (သို့) 8GB RAM သုံးထားပါတယျ။ အခကျြအလကျသိုလှောငျမှု အပိုငျးမှာတော့ 64GB (သို့) 128GB ဖွဈပွီး UFS 2.1 storage နဲ့ပါ။ Realme XT ဖုနျးမှာလညျး Realme X လိုမြိုး 4,000mAh ဘကျထရီစှမျးအားကို သုံးထားပွီး 20W VOOC adapter ထညျ့သှငျး ပေးထားကာ အားအပွညျ့သှငျးနိုငျဖို့ ကွာတဲ့အခြိနျဟာ မိနဈ 80 ဖွဈမယျလို့ သိရပါတယျ။ VOOC 3.0 fast charging နဲ့ပါ။ မကျြနှာပွငျ 6.4-inch (2340 × 1080 pixels) နဲ့ဖွဈပွီး HD+ Super AMOLED display မှာ Corning Gorilla Glass5ကာကှယျပေးထားပါတယျ။ Android 9.0 (Pie) အခွပွေု ColorOS 6.0 ကို သုံးနိုငျမှာပါ။ အနောကျဘကျမှာ 64MP အဓိကကငျမရာနဲ့အတူ 8MP 119-degree Ultrawide , 2MP Depth နဲ့ 2MP Macro တှေ ထညျ့ထားပါတယျ။ အရှဘေ့ကျ Selfie ကငျမရာကတော့ 16MP ဖွဈပါတယျ။ ကငျမရာတှမှော AI Scene Recognition တှေ ထညျ့သှငျပေးထားပွီး 3D curved glass panel နဲ့ ‘Hyperbola Light Streak’ effect ကို နောကျကြောဘကျမှာတှရေ့မှာပါ။
Redmi Note 8 Pro ဖုနျးမှာတော့ ပါဝါစှမျးအားအတှကျ Helio G90T chipset ကို သုံးထားပါတယျ။ ပွီးတော့ Xiaomi ဖုနျးတှထေဲမှာ ပထမဆုံး 64MP သုံးထားတဲ့ ဖုနျးဆိုရငျ ပိုမှနျပါလိမျ့မယျ။ ဒီဖုနျးရဲ့ ကငျမရာပိုငျးတှအေနနေဲ့ quad-rear camera setup နဲ့ဖွဈပါတယျ။ အဓိက ကငျမရာကတော့ 64MP ကိုသုံးထားပါတယျ။ ဒုတိယကငျမရာငယျကတော့ 8MP ၊ နောကျထပျကငျမရာ2လုံးကတော့ 2MP ဖွဈပွီး macro shots နဲ့ depth-effect တှရေိုကျကူးနိုငျစဖေို့အတှကျပါ။ ဖုနျးရဲ့အရှဘေ့ကျမှာတော့ 20MP ကငျမရာကို ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ မကျြနှာပွငျဟာ 6.53-inch LCD screen ဖွဈပါတယျ။ Helio G90T chipset ဟာ ဂိမျးမငျးပိုငျးကို အားစိုကျထားတဲ့chipset ဖွဈပါတယျ။ RAM နဲ့ storage ရှေးခယျြမှုပိုငျးအတှကျကတော့ 6GB + 64GB, 6GB + 128GB နဲ့ 8GB + 128GB တို့ဖွဈပါတယျ။ gaming အတှအေ့ကွုံအတှကျ HyperEngine tech ကိုထညျ့ပေးထားလို့ပါ။ Android9Pie အခွပွေု MIUI 10 ကို သုံးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ 4,500mAh battery အတှကျ 18W fast charging support လုပျပါတယျ။
Vivo NEX35G ဟာ Waterfall Screen ပါတဲ့ ပထမဆုံး ဖုနျးဖွဈပါတယျ။ မကျြနှာပွငျက ဘယျနဲ့ညာဘကျရဲ့ ဘေး ဘကျအထိ ဖုံးအုပျထားပါတယျ။ Physical Buttons တှေ မပါတော့ဘဲ Touch Sense လို့ နာမညျပေးထားတဲ့ ထိတှသေုံ့းရတဲ့ Virtual Buttons တှေ ထညျ့ထားပါတယျ။ အရှဘေ့ကျကငျမရာပိုငျးအတှကျ 0.65 စက်ကနျ့အတှငျးမှာ အထုတျ၊ အသှငျးလုပျပေးတဲ့ Pop-up Camera ပါပါတယျ။ နောကျကြောဘကျ ကငျမရာတှအေနနေဲ့ 64MP ကတော့ အဓိကပါ၊ ပွီးတော့ 13MP 120-degree ultra-wide lens, 13MP telephoto lens တို့ကိုသုံးထားပါတယျ။ အနောကျ ကငျမရာတှကေ 2x Optical Zoom နဲ့ 20x Digital Zoom တှကေို ထောကျပံ့ပါတယျ။ Super Night View က ဓါတျပုံ 12 ပုံကနေ 16 ပုံအထိ တဈပွိုငျနကျရိုကျကူးပေးပွီး Noise ကို လြှော့ခပြေးပါတယျ။ 4,500mAh ဖွဈပွီး 22.5W fast charging support လုပျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ 44W Ultra-fast Flash Charge နဲ့ C-DRX Power-saving နညျးပညာပါပါတယျ။ Android 9.0 (Pie) အခွပွေု Funtouch OS 9.1 ကိုသုံးနိုငျမှာဖွဈပွီး Snapdragon 855 Plus 7nm ပရိုဆကျဆာနဲ့ပါ။
ပွောရမယျဆိုရငျ ဒီဖုနျးဟာ Galaxy A70 ရဲ့ မြိုးဆကျသဈလို့ ဆိုရမှာပါ။ အခကျြအလကျ အတျောမြားမြားလညျး Galaxy A70 နဲ့ ဆငျတူပါတယျ။ အကွမျးမဉျြးအားဖွငျ့ ဘယျလိုအခကျြအလကျတှလေဲဆိုရငျ 6.7 လကျမ Full HD+ Infinity-U Super AMOLED Display ၊ Octa-core Snapdragon 675 SoC နဲ့အတူ Android 9.0 (Pie) အခွပွေု OneUI ဆိုတဲ့နရောတှမှောပါ။ A70s ရဲ့ကငျမရာပိုငျးတှေ အနနေဲ့ 64MP f/1.8 aperture နဲ့ 5MP depth sensor တို့ပါဝငျပွီး တတိယကငျမရာကတော့ 8MP 123° ultra-wide angle ကငျမရာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အရှဘေ့ကျကငျမရာကတော့ 32MP ဖွဈပါ တယျ။ 4500mAh ဘကျထရီနဲ့အတူ 5W super fast charging ထောကျပံ့မှာဖွဈပါတယျ။ In-display Fingerprint sensor နဲ့အလုပျလုပျမှာပါ။
Realme ရဲ့ ပထမဆုံး စှမျးရညျမွငျ့ စြေးအသကျသာဆုံး စမတျဖုနျးလို့တောငျ သတျမှတျနိုငျမှာပါ။ အရှယျသေး Notch ပါပွီး 90Hz Refresh Rate နဲ့ 135Hz Touch Sampling ပါတဲ့အတှကျ ဖုနျးကို ထိတှသေုံ့းရငျ အရမျးကိုမွနျပါတယျ။ နောကျကြောဘကျမှာ 64MP အဓိကကငျမရာနဲ့အတူ 13MP Telephoto lens ၊ 8MP 115° 1/3.13″ ultra-wide angle lens နဲ့ 2MP depth sensor တို့ကိုထညျ့ပေးထားပါတယျ။ ကငျမရာရဲ့ စှမျးဆောငျခကျြ အနနေဲ့ 20x hybrid zoom အထိရရှိမှာပါ။ အရှဘေ့ကျမှာတော့ 16MP ကငျမရာ ထညျ့ပေးထားပွီး Sony IMX471 sensor ဖွဈပါတယျ။ In-display fingerprint sensor နဲ့သုံးနိုငျမှာပါ။ မကျြနှာပွငျ 6.5-inch (2400 x 1080 pixels) ဖွဈပွီး Octa-Core Snapdragon 855 Plus ကို သုံးထားတဲ့ အဆငျ့မွငျ့ဖုနျးပါ။ ဘကျထရီကတော့ 4000mAh ထညျ့ပေးထားပွီး SuperVOOC fast charging ထောကျပံ့ပါတယျ။ curved glass display မှာ 90Hz refresh rate ဖွဈပွီး HDR10+, 100% DCI -P3 color gamut ထောကျပံ့ပါတယျ။
နောကျကြောဘကျမှာ ကငျမရာ 4လုံး တပျဆငျထားတဲ့ အလယျအလတျဆငျ့ စမတျဖုနျးလို့ ဆိုရမှာပါ။ မကျြနှာပွငျ 6.4-inch (2340 × 1080 pixels) ဖွဈပွီး ခပျသေးသေး Notch နဲ့ဖွဈပါတယျ။ ဖုနျးရဲ့ အခကျြအလကျပိုငျးအနနေဲ့ Snapdragon 730G ပရိုဆကျဆာကို သုံးထားပွီး Adreno 618 GPU တှဲဘကျပါတယျ။ OS ပိုငျးမှာ Android 9.0 (Pie) အခွပွေု ColorOS 6.1 နဲ့သုံးနိုငျမှာပါ။ 64MP အဓိကဆငျဆာအတှကျ Samsung GW1 ကိုသုံးထားပါတယျ။ 8MP 119° ultra-wide angle lens ၊ 2MP depth sensor နဲ့ 2MP မိုကျကရိုတို့ဖွဈပါတယျ။ အရှဘေ့ကျ notch ထဲမှာ 32MP f/2.0 aperture နဲ့သုံးနိုငျမှာပါ။ ဘကျထရီကတော့ 4000mAh ဖွဈပါတယျ။ မကျြနှာပွငျအောကျ လကျဗှရော ကိရိယာ မွှပျနှံထားပါတယျ။ 4000mAh ဘကျထရီနဲ့အတူ မိနဈ 30 အတှငျးမှာ 67 ရာခိုငျနှုနျးအားသှငျးပေးတဲ့ 30W VOOC 4.0 Fast Charging ပါပါတယျ။ အရှဘေ့ကျမှာတော့ 32MP f/2.0 aperture ကငျမရာကို သုံးထားပါတယျ။
Realme X2 / Realme XT730G
Realme X2 ဖုနျးကတော့ Realme စမတျဖုနျးတှထေဲမှာ 8nm Snapdragon 730G အသုံးပွုထားတဲ့ ပထမဆုံး စမတျဖုနျး ဖွဈပါတယျ။ ကြောဘကျကငျမရာလေးလုံးနဲ့ ဖွဈပါတယျ။ အဓိကကငျမရာက 64MP f/1.8 Samsung GW1 Sensor ဖွဈပါတယျ။ ကနျြတဲ့ကငျမရာတှကေတော့ 119 ဒီဂရီမွငျကှငျးကယျြ ရိုကျကူးနိုငျတဲ့ 8MP f/2.25 ၊ 2MP Macro နဲ့ 2MP Depth Sensor တို့ ဖွဈပါတယျ။
Realme XT730G ဖုနျးကလညျး 64MP ကငျမရာနဲ့ ဖုနျးဖွဈပါတယျ။ သူရဲ့ features ပိုငျးတှကေတော့ XT နဲ့ဆငျတူပွီး Snapdragon 730G processor ပွောငျးလဲသုံးစှဲလာမှာပါ။ 4,000mAh ဘကျထရီနဲ့အတူ Android9Pie-based ColorOS6ကိုတပါတညျး သုံးရမှာပါ။ 30W VOOC fast charge support လုပျပါတယျ။ Hyperbola 3D glass ဒီဇိုငျးနဲ့ဖွဈပွီး in-display fingerprint sensor ကိုလညျး ထညျ့ပေးထားပါတယျ။
ကိုရီးယားကုမ်ပဏီအနနေဲ့ 2019 မှာ စမတျဖုနျးစြေးကှကျအတှငျး ပိုမိုခွလှေမျးသှကျလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။ စမတျဖုနျးတှေ ကို ဘကျပေါငျးစုံအတှကျ ထုတျလုပျပေးလာလို့ပါ။ ပွီးတော့ ကငျမရာတှကေိုလညျး တဖွညျးဖွညျးအဆငျ့မွငျ့လာပါတယျ။ အခု သူတို့ရဲ့ကိုယျပိုငျဆငျဆာကို သုံးလာမယျ့ A စီးရီးဖုနျး တလုံးရှိနပေါတယျ။ အဲ့ဒီဖုနျးကတော့ Galaxy A81 ဖွဈပွီး လာမယျ့နှဈမှာ မိတျဆကျပေးမှာဖွဈပါတယျ။ upper mid-range ဖုနျးအမြိုးအစားဖွဈပွီး ကငျမရာ4လုံးကိုနောကျကြော ဘကျမှာ တပျဆငျလာမှာပါ။ လကျရှိခနျ့မှနျးခကျြတှအေရ Samsung GW1 sensor ကို အဓိကထားပွီး16MP wide-angle lens, 12MP telephoto lens with 2x or 5x optical zoom နဲ့ ToF (သို့) Time-of-Flight sensor တှကေို စနဈတကြ သုံးလာဖို့ မြားပါတယျ။
HMD Global အနနေဲ့ စမတျဖုနျးသဈ လမျးကွောငျးကို တဖွညျးဖွညျးဝငျရောကျလာတဲ့အခြိနျမှာ Triple Rear Cameras ပါတဲ့ Nokia 7.2 ကို ရောငျးခထြားပါပွီ။ စှမျးရညျသငျ့ Android One စမတျဖုနျးဖွဈတဲ့အဲ့ဒီဖုနျးမှာ 48MP Quad Pixel rear camera ကို သုံးထားပါတယျ။ အခုနောကျထပျ စြေးကှကျထဲကို မိတျဆကျနိုငျဖို့ ပွငျဆငျနတေဲ့ ဖုနျးကတော့ Nokia 8.2 ဖွဈပါတယျ။ သတငျးတှအေရ လာမယျ့နှဈမှာ ကငျြးပမယျ့ MWC 2020 မှာ မိတျဆကျသှားဖို့ရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။ ကငျမရာကတော့ 64MP သုံးလာမှာပါ။ ကငျမရာ4လုံးကို စကျဝိုငျးပုံစံ ဒီဇိုငျးနဲ့ထှကျလာနိုငျပါတယျ။ 5G အတှကျကိုလညျး Snapdragon 700 series chipset သုံးလာဖို့ရှိနပေါတယျ။ စြေးနှုနျးကတော့ ဒျေါလာ 500 ဝနျးကငျြလောကျ ကသြငျ့နိုငျ တယျလို့ သိရပါတယျ။ 8 GB RAM / 256 GB internal storage သီးသနျ့ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
စမတ်ဖုန်းတွေအတွက် ကင်မရာပိုင်းမြင့်တင့်မှုတိုးတက်လာနိုင်စွမ်းဟာ အတော်အားကောင်းလာပြီလို့ သတ်မှတ်နိုင်မှာပါ။ အခုနောက်ဆုံးထွက်ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် 64MP ဆင်ဆာတွေကိုတောင် သုံးလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Xiaomi ရဲ့ Redmi Note 8 Pro နဲ့အတူ Realme XT ၊ Vivo Nex3ဖုန်းတွေမှာ 64-megapixel Samsung GW1 sensor ကို သုံးလာကြပါတယ်။ 2019 ပထမနှစ်ဝက်လောက်တုန်းက 48-megapixel ဖုန်းကင်မရာတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ 64MP အထိကို ခုန်တက်သွားခဲ့ပါပြီ။ 48-megapixel ဖုန်းတွေဟာ 12-megapixel ပုံတွေကို pixel-binned လုပ်ပေးပြီး 64-megapixel ဖုန်းတွေကတော့ 16-megapixel images တွေကို ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Pixel ပေါင်းစပ် နိုင်စွမ်းမှာပိုကောင်းပြီး အသေးစိတ်ကျတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ရရှိသွားတယ်လို့ ပြောရင်ပိုမှန်ပါတယ်။
48MP resolution နဲ့ quad-pixel sensors ဟာ ဈေးကွက်ပိုင်းအရ ဦးဆောင်နိုင်မယ်လို့ သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြီး 48MP ဆင်ဆာရွေးချယ်မှုအပိုင်းမှာတောင် Samsung ရဲ့ GM1 နဲ့ GM2(ထပ်တိုး) တို့ထက်စာရင် Sony ရဲ့ IMX586 ကို ရွေးချယ်မှုပိုများခဲ့ပါတယ်။ အခု 64MP ဆင်ဆာမှာတော့ Samsung ရဲ့အလှည့်လို့ ဆိုရမှာပါ ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လက်ရှိ ထွက်ထားတဲ့ဖုန်းတွေမှာ သူ့ဆင်ဆာကို အသုံးပြုနေကြလို့ပါဘဲ။ ISOCELL Bright GW1 ဟာ အလင်းအားနည်းချိန်မှာ pixel4ခုကို တစ်ခုဖြစ်စေအောင် ပေါင်းစည်းပြီး 16MP ပုံတွေထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတပတ်မှာတော့ 64-megapixel ဖုန်းတွေနဲ့ လက်ရှိကင်မရာကွာခြားချက်တွေအကြောင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . . .
ISOCELL Bright GW1 ဟာ Samsung ကနေ ထုတ်ထားတဲ့ 48MP image sensor လိုပဲ 0.8 μm အရွယ် pixel တွေ သုံးနိုင်တဲ့ 64MP sensor ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အလင်းဖမ်းတဲ့နေရာမှာ ပိုပြီးအလင်းဝင်မှုမြင့်တဲ့ အကြီးစား sensor တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ 48MP sensor ကတော့ 12MP ပုံတွေကို default အနေနဲ့ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Samsung ရဲ့ 64MP sensor မှာ tetracell binding နည်းပညာကို သုံးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလင်းရောင်နည်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် tetracell binding နည်းပညာက pixel လေးခုကို တစ်ခုတည်းအဖြစ် ပြန်ချုံ့ပေးပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ 16MP ပုံတွေကို ထုတ်ပေးမှာပါ။ တကယ်လို့ အလင်းရောင် လုံလုံလောက်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ 64MP အပြည့်ရှိတဲ့ ပုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Autofocus ပိုကောင်းလာဖို့နဲ့ 480 fps full HD recording အတွက် high-performance phase detection လည်း ပါဝင်လာပါတယ်။ Real-time HDR ကိုလည်း support လုပ်မှာပါ။ 48 MP sensor မှာ သုံးထားတဲ့ 0.8μm pixel size ကိုပဲ 64 MP sensor မှာ ပြန်သုံးထားတဲ့အတွက် overall sensor size ကို 33% အထိ ပိုကြီးသွားစေပြီး 1/1.7” sensor လောက် ဖြစ်သွားစေပါတယ်။
64MP ISOCELL Bright GW1 sensor သုံးထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်
Realme XT ရဲ့ပါဝါစွမ်းအားပိုင်းအတွက် 10nm Snapdragon 712 chipset ကိုသုံးထားပြီး 4GB, 6GB (သို့) 8GB RAM သုံးထားပါတယ်။ အချက်အလက်သိုလှောင်မှု အပိုင်းမှာတော့ 64GB (သို့) 128GB ဖြစ်ပြီး UFS 2.1 storage နဲ့ပါ။ Realme XT ဖုန်းမှာလည်း Realme X လိုမျိုး 4,000mAh ဘက်ထရီစွမ်းအားကို သုံးထားပြီး 20W VOOC adapter ထည့်သွင်း ပေးထားကာ အားအပြည့်သွင်းနိုင်ဖို့ ကြာတဲ့အချိန်ဟာ မိနစ် 80 ဖြစ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ VOOC 3.0 fast charging နဲ့ပါ။ မျက်နှာပြင် 6.4-inch (2340 × 1080 pixels) နဲ့ဖြစ်ပြီး HD+ Super AMOLED display မှာ Corning Gorilla Glass5ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ Android 9.0 (Pie) အခြေပြု ColorOS 6.0 ကို သုံးနိုင်မှာပါ။ အနောက်ဘက်မှာ 64MP အဓိကကင်မရာနဲ့အတူ 8MP 119-degree Ultrawide , 2MP Depth နဲ့ 2MP Macro တွေ ထည့်ထားပါတယ်။ အရှေ့ဘက် Selfie ကင်မရာကတော့ 16MP ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာတွေမှာ AI Scene Recognition တွေ ထည့်သွင်ပေးထားပြီး 3D curved glass panel နဲ့ ‘Hyperbola Light Streak’ effect ကို နောက်ကျောဘက်မှာတွေ့ရမှာပါ။
Redmi Note 8 Pro ဖုန်းမှာတော့ ပါဝါစွမ်းအားအတွက် Helio G90T chipset ကို သုံးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ Xiaomi ဖုန်းတွေထဲမှာ ပထမဆုံး 64MP သုံးထားတဲ့ ဖုန်းဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဖုန်းရဲ့ ကင်မရာပိုင်းတွေအနေနဲ့ quad-rear camera setup နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက ကင်မရာကတော့ 64MP ကိုသုံးထားပါတယ်။ ဒုတိယကင်မရာငယ်ကတော့ 8MP ၊ နောက်ထပ်ကင်မရာ2လုံးကတော့ 2MP ဖြစ်ပြီး macro shots နဲ့ depth-effect တွေရိုက်ကူးနိုင်စေဖို့အတွက်ပါ။ ဖုန်းရဲ့အရှေ့ဘက်မှာတော့ 20MP ကင်မရာကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ဟာ 6.53-inch LCD screen ဖြစ်ပါတယ်။ Helio G90T chipset ဟာ ဂိမ်းမင်းပိုင်းကို အားစိုက်ထားတဲ့chipset ဖြစ်ပါတယ်။ RAM နဲ့ storage ရွေးချယ်မှုပိုင်းအတွက်ကတော့ 6GB + 64GB, 6GB + 128GB နဲ့ 8GB + 128GB တို့ဖြစ်ပါတယ်။ gaming အတွေ့အကြုံအတွက် HyperEngine tech ကိုထည့်ပေးထားလို့ပါ။ Android9Pie အခြေပြု MIUI 10 ကို သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 4,500mAh battery အတွက် 18W fast charging support လုပ်ပါတယ်။
Vivo NEX35G ဟာ Waterfall Screen ပါတဲ့ ပထမဆုံး ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်က ဘယ်နဲ့ညာဘက်ရဲ့ ဘေး ဘက်အထိ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ Physical Buttons တွေ မပါတော့ဘဲ Touch Sense လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ထိတွေ့သုံးရတဲ့ Virtual Buttons တွေ ထည့်ထားပါတယ်။ အရှေ့ဘက်ကင်မရာပိုင်းအတွက် 0.65 စက္ကန့်အတွင်းမှာ အထုတ်၊ အသွင်းလုပ်ပေးတဲ့ Pop-up Camera ပါပါတယ်။ နောက်ကျောဘက် ကင်မရာတွေအနေနဲ့ 64MP ကတော့ အဓိကပါ၊ ပြီးတော့ 13MP 120-degree ultra-wide lens, 13MP telephoto lens တို့ကိုသုံးထားပါတယ်။ အနောက် ကင်မရာတွေက 2x Optical Zoom နဲ့ 20x Digital Zoom တွေကို ထောက်ပံ့ပါတယ်။ Super Night View က ဓါတ်ပုံ 12 ပုံကနေ 16 ပုံအထိ တစ်ပြိုင်နက်ရိုက်ကူးပေးပြီး Noise ကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ 4,500mAh ဖြစ်ပြီး 22.5W fast charging support လုပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် 44W Ultra-fast Flash Charge နဲ့ C-DRX Power-saving နည်းပညာပါပါတယ်။ Android 9.0 (Pie) အခြေပြု Funtouch OS 9.1 ကိုသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Snapdragon 855 Plus 7nm ပရိုဆက်ဆာနဲ့ပါ။
ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီဖုန်းဟာ Galaxy A70 ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ အချက်အလက် အတော်များများလည်း Galaxy A70 နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ အကြမ်းမျဉ်းအားဖြင့် ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေလဲဆိုရင် 6.7 လက်မ Full HD+ Infinity-U Super AMOLED Display ၊ Octa-core Snapdragon 675 SoC နဲ့အတူ Android 9.0 (Pie) အခြေပြု OneUI ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာပါ။ A70s ရဲ့ကင်မရာပိုင်းတွေ အနေနဲ့ 64MP f/1.8 aperture နဲ့ 5MP depth sensor တို့ပါဝင်ပြီး တတိယကင်မရာကတော့ 8MP 123° ultra-wide angle ကင်မရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ဘက်ကင်မရာကတော့ 32MP ဖြစ်ပါ တယ်။ 4500mAh ဘက်ထရီနဲ့အတူ 5W super fast charging ထောက်ပံ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ In-display Fingerprint sensor နဲ့အလုပ်လုပ်မှာပါ။
Realme ရဲ့ ပထမဆုံး စွမ်းရည်မြင့် ဈေးအသက်သာဆုံး စမတ်ဖုန်းလို့တောင် သတ်မှတ်နိုင်မှာပါ။ အရွယ်သေး Notch ပါပြီး 90Hz Refresh Rate နဲ့ 135Hz Touch Sampling ပါတဲ့အတွက် ဖုန်းကို ထိတွေ့သုံးရင် အရမ်းကိုမြန်ပါတယ်။ နောက်ကျောဘက်မှာ 64MP အဓိကကင်မရာနဲ့အတူ 13MP Telephoto lens ၊ 8MP 115° 1/3.13″ ultra-wide angle lens နဲ့ 2MP depth sensor တို့ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။ ကင်မရာရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက် အနေနဲ့ 20x hybrid zoom အထိရရှိမှာပါ။ အရှေ့ဘက်မှာတော့ 16MP ကင်မရာ ထည့်ပေးထားပြီး Sony IMX471 sensor ဖြစ်ပါတယ်။ In-display fingerprint sensor နဲ့သုံးနိုင်မှာပါ။ မျက်နှာပြင် 6.5-inch (2400 x 1080 pixels) ဖြစ်ပြီး Octa-Core Snapdragon 855 Plus ကို သုံးထားတဲ့ အဆင့်မြင့်ဖုန်းပါ။ ဘက်ထရီကတော့ 4000mAh ထည့်ပေးထားပြီး SuperVOOC fast charging ထောက်ပံ့ပါတယ်။ curved glass display မှာ 90Hz refresh rate ဖြစ်ပြီး HDR10+, 100% DCI -P3 color gamut ထောက်ပံ့ပါတယ်။
နောက်ကျောဘက်မှာ ကင်မရာ 4လုံး တပ်ဆင်ထားတဲ့ အလယ်အလတ်ဆင့် စမတ်ဖုန်းလို့ဆိုရမှာပါ။ မျက်နှာပြင် 6.4-inch (2340 × 1080 pixels) ဖြစ်ပြီး ခပ်သေးသေး Notch နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ အချက်အလက်ပိုင်းအနေနဲ့ Snapdragon 730G ပရိုဆက်ဆာကို သုံးထားပြီး Adreno 618 GPU တွဲဘက်ပါတယ်။ OS ပိုင်းမှာ Android 9.0 (Pie) အခြေပြု ColorOS 6.1 နဲ့သုံးနိုင်မှာပါ။ 64MP အဓိကဆင်ဆာအတွက် Samsung GW1 ကိုသုံးထားပါတယ်။ 8MP 119° ultra-wide angle lens ၊ 2MP depth sensor နဲ့ 2MP မိုက်ကရိုတို့ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ဘက် notch ထဲမှာ 32MP f/2.0 aperture နဲ့သုံးနိုင်မှာပါ။ ဘက်ထရီကတော့ 4000mAh ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အောက် လက်ဗွေရာ ကိရိယာ မြှပ်နှံထားပါတယ်။ 4000mAh ဘက်ထရီနဲ့အတူ မိနစ် 30 အတွင်းမှာ 67 ရာခိုင်နှုန်းအားသွင်းပေးတဲ့ 30W VOOC 4.0 Fast Charging ပါပါတယ်။ အရှေ့ဘက်မှာတော့ 32MP f/2.0 aperture ကင်မရာကို သုံးထားပါတယ်။
Realme X2 ဖုန်းကတော့ Realme စမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ 8nm Snapdragon 730G အသုံးပြုထားတဲ့ ပထမဆုံး စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောဘက်ကင်မရာလေးလုံးနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကင်မရာက 64MP f/1.8 Samsung GW1 Sensor ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ကင်မရာတွေကတော့ 119 ဒီဂရီမြင်ကွင်းကျယ် ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ 8MP f/2.25 ၊ 2MP Macro နဲ့ 2MP Depth Sensor တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Realme XT730G ဖုန်းကလည်း 64MP ကင်မရာနဲ့ ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ features ပိုင်းတွေကတော့ XT နဲ့ဆင်တူပြီး Snapdragon 730G processor ပြောင်းလဲသုံးစွဲလာမှာပါ။ 4,000mAh ဘက်ထရီနဲ့အတူ Android9Pie-based ColorOS6ကိုတပါတည်း သုံးရမှာပါ။ 30W VOOC fast charge support လုပ်ပါတယ်။ Hyperbola 3D glass ဒီဇိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြီး in-display fingerprint sensor ကိုလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီအနေနဲ့ 2019 မှာ စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်အတွင်း ပိုမိုခြေလှမ်းသွက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတွေ ကို ဘက်ပေါင်းစုံအတွက် ထုတ်လုပ်ပေးလာလို့ပါ။ ပြီးတော့ ကင်မရာတွေကိုလည်း တဖြည်းဖြည်းအဆင့်မြင့်လာပါတယ်။ အခု သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆင်ဆာကို သုံးလာမယ့် A စီးရီးဖုန်း တလုံးရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒီဖုန်းကတော့ Galaxy A81 ဖြစ်ပြီး လာမယ့်နှစ်မှာ မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ upper mid-range ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ကင်မရာ4လုံးကိုနောက်ကျော ဘက်မှာ တပ်ဆင်လာမှာပါ။ လက်ရှိခန့်မှန်းချက်တွေအရ Samsung GW1 sensor ကို အဓိကထားပြီး16MP wide-angle lens, 12MP telephoto lens with 2x or 5x optical zoom နဲ့ ToF (သို့) Time-of-Flight sensor တွေကို စနစ်တကျ သုံးလာဖို့ များပါတယ်။
HMD Global အနေနဲ့ စမတ်ဖုန်းသစ် လမ်းကြောင်းကို တဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ Triple Rear Cameras ပါတဲ့ Nokia 7.2 ကို ရောင်းချထားပါပြီ။ စွမ်းရည်သင့် Android One စမတ်ဖုန်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဖုန်းမှာ 48MP Quad Pixel rear camera ကို သုံးထားပါတယ်။ အခုနောက်ထပ် ဈေးကွက်ထဲကို မိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဖုန်းကတော့ Nokia 8.2 ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းတွေအရ လာမယ့်နှစ်မှာ ကျင်းပမယ့် MWC 2020 မှာ မိတ်ဆက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကင်မရာကတော့ 64MP သုံးလာမှာပါ။ ကင်မရာ4လုံးကို စက်ဝိုင်းပုံစံ ဒီဇိုင်းနဲ့ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ 5G အတွက်ကိုလည်း Snapdragon 700 series chipset သုံးလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ ဒေါ်လာ 500 ဝန်းကျင်လောက် ကျသင့်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ 8 GB RAM / 256 GB internal storage သီးသန့်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Previous articleဈေးနှုနျးသငျ့တငျ့တဲ့ 5G chipset ထုတျလာအုံးမယျ့ MediaTek
Next articleSamsung Galaxy M10 VS Samsung Galaxy M20
‘world’s first’ 108MP penta-camera smartphone : Mi CC9 Pro